June 2015 - Page 45 of 45 - iftineducation.com
aadan21 / June 1, 2015
iftineducation.com – Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga mudane Cabdiraxmaan Caynte ayaa waxaa laga waraystay barnaamijka tirkoobka dadka Soomaaliyeed ee ismaandhaafka iyo muranka dhaliyay. Wasiirka ayaa sharaxaad ka bixiyay sida uu u dhacay tirikoobka, sheegayna in howlihii la qabtay sadexdii sano ee u danbeysan aysan ahayn tirakoob rasmi ah, laakiin uu yahay Sahan qiyaaseed. Wasiirka ayaa sheegay inay og’yihiin in systemka ay…
DAAWO: Wariye Waraysi ka Qaaday Soomaalida Ku nool Magaalada Minneapolis (VIDEO)
iftineducation.com – Waraysi laga qaaday qaar kamid ah Soomaalida ku nool Magaalada Minneapolis dalka maraykanka ayaa sheegay inay taageersan yihiin in dalka Maraykanka lagfu dhaqo Sharciga Shareecada ama (Sharia Low). Arintaan ayaa waxaa ay la yaab ku noqotay dadka Marykanka ah, waxaana laamaha Social Media-ha ka qarxay wadaxaajoodyo iyo dhaleecaymo ay dadka qaar u jeedinayaan bulshada Somalida ah ee ku nool…
Wasaaradda Macdanta oo Rajada Batroolka Somaliya ku Tilmaantay mid dhiira-gelin leh
iftineducation.com – War maanta kasoo baxay Wasaarada Macdanta iyo Batroolka ee Dowladda Federaalka ayaa lagu sheegay in wasaarada aysan ogolaaneyn heshiis aanan xalaal aheyn oo ku saabsan arimaha Shidaalka. Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka waxaa farxad u ah in ay ka warbixiso in sahanka shidaalka laga sameeyey Soomaliya uu yahay rajadiisa mid dhiira-gelin leh. Soomaliya waa mid dhaqso u soo kabsaneysa, maalgashayaashu…
Muqdisho: Wadooyin Biyaha Roobka xereen oo la furay: Sawirro
iftineducation.com – Waxaa shalay ilaa xalay gurmad ku jiray waaxda howlaha guud ee Gobolka Banadir taas oo sameynaysay in ay furto dhamaan wadooyinka biyuhuxireen iyo goobaha loogu tala galay in ay biyuhu fadhiistaan. Waxaa kale oo ay sameysay in ay Biyaha kasaarto guryaha dadku daganaa oo ay Biyuhu galeen.
Daawo: Ninka Hindiya ugu dheer oo la dhibtoonaya inuu helo Jeceyl
iftineducation.com – Dharmendra Singh oo ah ninka ugu dheer dalka India, isla markaana Labo inches kaliya ka gaaban ninka ugu dheer dunida ayaa u fududeyn nolosha uu ku nool yahay, wuxuuna la dhibtoonayaa inuu helo jaceyl uu nolosha la qeybsado. Dharmendra oo ah calaf doon 32 sano jir ah, ku nool magaalada Meerut, ee gobolka Uttar Pradesh, wuxuuna baadi goob ugu…
Muungaab: Annaga soo saari doono tirakoobka rasmiga ah ee G/Banaadir Sawirro
iftineducation.com – Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xusen “Muungaab” oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in maamulka gobalka Banaadir uu dhawaan soo saari doono tirada rasmiga ah dadka ku nool magaalada caasimada ah ee Muqdisho isagoo tira koobka dhawaan la soo saaray ku tilmaamay mid aan sax ahayn. Xasan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa…
DF oo war kasoo saartay Xasuuqa ay Liyuu Boolis ka wadaan Galgaduud
iftineducation.com – DF ayaa markii ugu horeeysay ka hadashay xasuuqa ay Ciidamada ismaamulka Soomaalida Ethiopia ka wadaan qeybo kamid ah Gobolka Galgaduud. Wasiirka ariimaha Gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen “Odawaa” ayaa ka hadlay dagaaladda ka socda soohdinta u dhaxeysa gobolka Galgaduud iyo Dowlad Deganka Soomaalida Ethiopia, kaas oo u dhexeya dad xoolo dhaqato ah iyo Ciidamada…
Baarlamanka DF oo maanta codka kalsoonida u qaadaya Mooshinka Baarlamaanka Jubbaland
iftineducation.com – Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod u qaadaya mooshinka laga keenay dhismaha Baarlamaanka Maamulka KMG ee Jubba, mooshinkaasi oo dhowr baaqatay cod u qaadistiisa. Kulan saacadaha soo socda ee maanta ay Xildhibaanada ku yeelanayaan aqalka Golaha shacabka, ayaa waxaa cod loogu qaadayaa mooshinkaasi oo ah Ajandaha koowaad ee baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Cumar oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya ayaa…